10 उत्तम गोपनीयता सिक्का र तिनीहरूलाई कसरी किन्न - Cazoo
घर » घर » 10 उत्तम गोपनीयता सिक्का र तिनीहरूलाई कसरी खरिद गर्ने
ट्याग: बाइनान्स, Monero, ओएसिस नेटवर्क, फला नेटवर्क, गोपनीयता सिक्का, गोप्य, Zcash
पठन समय:3मिनुटी
Le गोपनीयता सिक्का क्रिप्टोकरेन्सीहरू हुन् जसले ब्लकचेनमा हुने लेनदेनहरू लुकाउन वा अस्पष्ट गर्न सक्छन् उच्च स्तरको गोपनीयता र अज्ञातता कायम राख्न।
तिनीहरूको उन्नत क्रिप्टोग्राफिक विधि भनेको Bitcoin र अन्य Alt सिक्काहरू जस्ता अन्य क्रिप्टोकरन्सीहरूबाट अलग गोपनीयता सिक्काहरू सेट गर्दछ। के यो क्रिप्टो लेनदेन मा पूर्ण गोपनीयता र पूर्ण गुमनाम हुनु को अर्थ छ? यदि यो अर्थ बनाउँछ भने, "गोपनीयता सिक्का" खेलमा आउँछ।
नियमित क्रिप्टोकरेन्सीहरू पूर्णतया निजी हुँदैनन्, किनकि लेनदेनहरू सबै ब्लकचेन, सार्वजनिक खाता, र सबैका लागि खुला हुन्छन्। जबकि यस्तो प्रणालीले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई पूर्ण गोपनीयता र अज्ञातता प्रदान गर्दैन, यसले कसैको ठेगानामा पहिचान लिंक गर्न सजिलो बनाउँछ।
गोपनीयता सिक्का बिटकोइन वा अन्य altcoins भन्दा धेरै फरक छैन। तिनीहरूले वालेट ठेगानाहरू र अस्पष्ट जानकारी लुकाउँछन् जुन वालेटको मालिक पहिचान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस लेखमा, हामी गोपनीयता सिक्काहरू के हुन्, तिनीहरूले कसरी काम गर्छन्, र तपाइँ कसरी Binance को साथ आफ्नो वालेटमा तिनीहरूलाई थप्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे गहिरो डुबकी लिनेछौं।
गोपनीयता सिक्का के हो?
गोपनीयता सिक्का प्रयोग गर्ने क्रिप्टोग्राफिक प्रविधिहरू के हुन्?
के गोपनीयता सिक्काहरू साँच्चै खोज्न नसकिने छन्?
Binance मा सबै भन्दा राम्रो गोपनीयता सिक्का
गोपनीयता सिक्का दुई मुख्य सिद्धान्तहरूमा निर्मित क्रिप्टोकरेन्सीहरूको वर्ग हो: गुमनामता र अनट्रेसबिलिटी।
गोपनीयता सिक्का कसरी काम गर्छ?
अन्य क्रिप्टोकरेन्सीहरू जस्तै, गोपनीयता सिक्काहरूले पनि वितरित खाताको रूपमा ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गर्दछ। जबकि विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सीहरु संग लेनदेनहरु सामान्यतया सार्वजनिक हुन्छन्, गोपनीयता सिक्काहरु लाई लेनदेनहरु लाई लिंक गर्न को लागी धेरै गाह्रो (वा असम्भव) बनाउँदछ। कोषको स्रोत वा गन्तव्य निर्धारण गर्न सम्भव छैन।
नियमित क्रिप्टोकरेन्सीहरूबाट गोपनीयता सिक्काहरू छुट्याउने कुरा के हो भने तिनीहरूले प्रयोगकर्ताको वालेट ब्यालेन्स र ठेगाना लुकाउन गुमनाम र गैर-ट्रेसेबिलिटी कायम राख्न क्रिप्टोग्राफी प्रयोग गर्छन्।
म चार क्रिप्टोग्राफिक प्रविधिहरू रूपरेखा गर्ने प्रयास गर्छु जुन केही निजी मुद्राहरूले जानकारी गोप्य राख्न प्रयोग गर्दछ।
लुकेका ठेगानाहरू (लुकेका ठेगानाहरू): प्रत्येक लेनदेनले प्राप्तकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित गर्न नयाँ ठेगाना उत्पन्न गर्छ। यसले बाह्य पार्टीहरूले तपाईंको वालेट ठेगानामा कुनै पनि भुक्तानीहरू लिङ्क गर्न सक्दैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ।
Coin Join: यसले सिक्का मिक्सरको रूपमा काम गर्दछ जसले एकल लेनदेनमा धेरै व्यक्तिहरूको लेनदेनहरू मर्ज गर्दछ। त्यसपछि, तेस्रो पक्षले वास्तवमा सिक्काको सही मात्रा विभाजित गर्दछ र प्राप्तकर्ताहरूलाई पठाउँछ। प्रत्येक प्राप्तकर्ताले ट्रेसिबिलिटी कम गर्न नयाँ ठेगानामा सिक्का प्राप्त गर्दछ।
Zk-SNARKs: Zk-SNARKs, को लागि संक्षिप्त शून्य-ज्ञान संक्षिप्त ज्ञानको गैर-अन्तरक्रियात्मक तर्क, लेनदेन यसको विवरण (प्रेषक, प्राप्तकर्ता, रकम) साझा नगरी मान्य छ भनेर प्रमाणित गर्न अनुमति दिन्छ।
औंठी हस्ताक्षर: जब तपाइँ एक निजी कुञ्जी मार्फत लेनदेनमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, अरूले तपाइँको हस्ताक्षर तपाइँको ठेगानामा लिङ्क गर्न सक्छन्। घण्टी हस्ताक्षरहरूले यसलाई हुनबाट रोक्छ।
एउटै लेनदेनमा धेरै हस्ताक्षरहरू भएकाले, अरूलाई तपाईंको ठेगानामा तपाईंको हस्ताक्षर लिङ्क गर्न अझ गाह्रो हुन्छ।
यो प्रत्येक गोपनीयता सिक्काको डिजाइन र संरचनामा निर्भर गर्दछ, किनकि केही अरूहरू भन्दा बढी पत्ता लगाउन योग्य छन् ... र ती सबै उनीहरूले भनेजस्तो निजी छैनन्। खराब डिजाइन गरिएको प्रोटोकलहरूमा त्रुटिहरू हुन सक्छन् जसले तिनीहरूको लेनदेनलाई ट्रेस गर्न सक्छ। यद्यपि, हालको एन्क्रिप्शन र एन्क्रिप्शन विधिहरूलाई विचार गर्दा, गोपनीयता सिक्का राम्रोसँग काम गर्दछ। सँधै सावधान रहनुहोस्: नयाँ विश्लेषणात्मक उपकरणहरूको विकासको साथ, कम्प्युटरहरू कुनै दिन आधुनिक इन्क्रिप्शन विधिहरू क्र्याक गर्न पर्याप्त शक्तिशाली हुन सक्छ।
साँचो वित्तीय गोपनीयता खोज्नेहरूका लागि गोपनीयता सिक्का उत्कृष्ट छन्। तल मैले उत्तम गोपनीयता सिक्काहरू सूचीबद्ध गरेको छु जुन तपाईंले आफ्नो क्रिप्टोकरेन्सी वालेटमा थप्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ (* मूल्यहरू र अप्रिल २०२२ सम्मको बजार क्याप्स):
Monero (XMR) $ 217,50 को मूल्य र $ 3.936,97M को बजार क्याप।
ओएसिस नेटवर्क (ROSE), $ 0,27 को मूल्यमा र $ 927,01M * को मार्केट क्यापको साथ।
अस्वीकृत (DCR), $ 62.50 को मूल्यमा र $ 868.52M * को मार्केट क्याप।
गोप्य (SCRT), $ 5.37 को मूल्य र $ 876.89M को बजार क्याप
क्षितिज (ZEN), $ 48.18 को मूल्य र $ 589.19M * को बजार क्याप।
विगार्नुहोस् (XVG), $ 0,013 को मूल्यमा र $ 218,47M * को बजार क्याप।
डुम नेटवर्क (DUSK), $ 0.50 को मूल्य र $ 201.48M * को बजार क्याप।
फला नेटवर्क (PHA), $ 0.29 को मूल्यमा र $ 79.20M * को बजार क्याप।
किरण (BEAM), $ 0.38 को मूल्यमा र $ 42.54M * को बजार क्याप।
बिटकोइन र अन्य धेरै क्रिप्टोकरेन्सीहरू विकेन्द्रीकृत नेटवर्कमा चल्ने हुनाले, तिनीहरूले केही हदसम्म गोपनीयता प्रदान गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको पहिचान प्रत्यक्ष रूपमा खुलासा नगरिकन वालेटहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिँदै। यद्यपि, तिनीहरू पूर्ण रूपमा निजी छैनन् किनभने लेनदेनहरू ब्लकचेनमा रेकर्ड गरिएका छन्। जस्तै, गोपनीयता सिक्का गुमनाम र गोपनीयता को उच्च स्तर खोज्ने को लागी एक विकल्प हुन सक्छ।
त्यसले भन्यो, कुनै पनि गोपनीयता सिक्का खरिद गर्नु र प्रतिबद्ध गर्नु अघि DYOR लाई सम्झनुहोस्।
अघिल्लो लेखफुटबल प्रस्ताव: स्वाइप फिएट र सेयर। पूल पुरस्कार: ance०,००० BUSD Binance संग
अर्को लेखNFTs खरिद र बिक्रीको लागि विचार गर्नुपर्ने मेट्रिक्स